प्रदेश नं. २ मा एमालेको मतपरिणाम, कमजोर लागे पनि यसकारण राम्रो - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको परिणामले सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेलाई हैरानीमा पारेको छ । चुनावअघि नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो प्रदेश २ मा पनि एमालेले राम्रै नतिजा ल्याउला । एमालेको नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो आत्मगत अवस्थाको मूल्यांकन गरेरै यस्तो भनेको थियो कि नागरिकको मनोवैज्ञानिक रुपमा मन जित्नको लागि “पोलिटिकल स्टन्ट” अन्तर्गत यस्तो उदघोष गरेको थियो भन्ने बेग्लै कुरा हो ।
तर नेतृत्व प्रति अगाध आस्था राख्ने आम कार्यकर्तामा नेतृत्वको यो अभिव्यक्ति र दावीले उत्साहको संचार गराएको थियो । परिणाममा आइपुग्दा त्यो उत्साहले काम गरेन, जसले गर्दा आधारभूत तहको एमाले पंक्तिलाई नेतृत्वको यो शैली पनि फिटिक्कै मन परेको छैन । काम नगर्ने गफ मात्रै गर्ने प्रवृति खास गरेर जिल्ला र प्रदेशसहितको नेतृत्वमा छ भन्ने कुरा कार्यकर्ताको तहमा स्थापित भएको छ । चुनावी परिणामले यो कुरालाई झनै बल पुर्‍याएको छ ।
एमालेको पक्षमा जस्तो परिणाम आएको छ, त्यसले एमालेको आधारभूत तहको कार्यकर्ता पंक्तिलाई चिन्तित बनाएको छ । उनीहरुमा निराशा पनि छ । तर निराशालाई उत्साहमा रुपान्तरण गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता यतिवेला महशुस भएको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
प्रदेश न २ मा एमालेले अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन, तर जुन परिणाम आएको छ, त्यो एमालेका लागि आफैमा महत्वपूर्ण पनि छ । अरु प्रदेशमा एमालेले जस्तो परिणाम ल्याएको थियो, त्यही हाराहारीको प्रदर्शन प्रदेश नं २ मा हुने सकेन वा गर्न सकेन भन्ने साँचो हो । यसका पछाडि केही कारण छन । ति कारणको बारेमा सुक्ष्म बिश्लेषण नगरी एमालेको सन्दर्भमा टिप्पणी गरिहाल्नु पनि न्यायिक नहुन सक्छ । तर एमालेको लागि प्रदेश नम्बर २ को भूगोलमा मनोबिज्ञान जति प्रतिकूल थियो, त्यस्तो अवस्थामा एमालेले प्राप्त गरेको परिणाम कमजोर हैन ।
कुनै राजनीतिक शक्तिका बिरुद्ध मधेशको सांस्कृतिक बजा ढोल तासा बजाएर लखेट्ने निर्णय भएको थियो भने त्यो एमालेका बिरुद्ध भएको थियो । आफ्ना बैठक र सामान्य सांगठनिक गतिविधि समेत गर्न नपाउने वतावरणको निर्माण यदि कुनै राजनीतिक दलका निम्ति भएको थियो भने त्यो एमालेका लागि नै थियो । प्रजातान्त्रिक संस्कार र आचारणको पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने नेताहको आम अपील थियो “एमाले मुक्त मधेश”, तर आज परिणामले एमाले मुक्त बनाउने अपीललाई नागरिकले अस्वीकार गरिदिए ।
नेतृत्वले सोचेजस्तो परिणाम किन आएन रु
२०७२ को साउन ३२ देखि तेश्रो चरणको चुनावमा राजपाले सहभागिता जनाउने निर्णय नगर्दाको दिनसम्म प्रदेश नं। २ मा एमालेको सांगठनिक गतिविधि शून्य थियो भन्दा अन्यथा नहोला । संविधान बिरोधी आन्दोलनको प्रारम्भमा नेकपा एमालेको स्थानीय स्तरको नेतृत्व नै अन्यौलमा रह्यो । आन्दोलन ठीकै हो भन्ने मनोबिज्ञानले कतिपय स्थानीय नेतृत्व नै ग्रसित भयो ।
नेकपा एमालेका मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुको स्वर पार्टी भित्र र नागरिकको बिचमा कस्तो उठ्यो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेन । प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरामा एमाले नेतृत्वले जाँगर पनि देखाएन । यसले आन्दोलन पनि ठीकै हो, पार्टी पनि अलि अलि ठिक हो भन्ने प्रवृतिका कारण एमालेको संगठनको काम हुन सकेन । चुनावी मैदान राजपा जुन तयारीबिना उत्रिनु परेको थियो, एमालेको सन्दर्भमा पनि अवस्था त्यस्तै हो ।
दोश्रो चरणको चुनावको मनोनयन दर्ताको मिति असार २ भन्दा अघिसम्म तराईमा मधेश केन्द्रित दलहरुले एमालेको गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका थिए । मधेश केन्द्रित दलले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेरै एमालेको राजनीतिक कार्यक्रमलाई निषेध गरेका थिए । कतिपय स्थानामा भौतिक आक्रमणको प्रयास समेत भए । यसले एमालेलाई रक्षापंक्तिमा लगेर उभ्यायो । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा निष्क्रियता थप्यो । राजमार्गमा रहेको क्षेत्रमा बैठक र कार्यकर्ताको भेला राखेर कार्यकर्ता जोगाउने काम बाहेक नागरिकसँग जोडिने कामबाट एमाले टाढियो । प्रदेश नम्बर २ मा अहिले देखिएको परिणामको एउटा कारण यही हो ।
कारण नं. २ः
कारण नं. ३ः
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेशमा सबैभन्दा ठूलो भिलेनको रुपमा देखाउने काम भयो । मधेशी आन्दोलनकारीले स्थापित गरेको कुरा के हो भने ओलीकै कारण मधेश बिरोधी संविधान जारी भएको हो । त्योबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए पनि त्यसको मुख्यकर्ता ओली हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्न मधेशी दलको आधारभूत तहको कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेताहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । ओलीलाई जसले बढी आलोचना गर्न सक्यो, त्यही ठूलो क्रान्तिकारी हुने अवस्था सिर्जना भयो । केपी ओलीको बिरोध क्रान्तिकारीताको मानक बन्न पुग्यो । आँप, माखेसाङला, युपी बिहार माग्न जाउ, झलनाथ खनालको “धोती”प्रदेश जस्ता कुराहरुको यति प्रचार गरियो कि ओली र समग्र एमाले बिरुद्ध घृणाको राजनीति गरियो । फरक प्रसंगमा नेताहरुले दिएको अभिब्यक्ति अहिले पनि नियोजित रुपमा एमालेको बिरुद्ध उपयोग गरिन्छ । राजनीतिक सुझबुझ भएकाले यो कुरा बहसमा ल्याउँछन र एमालेले मधेशीलाई हेप्यो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कोशीस भइरहन्छ ।
तर एमालेको स्थानीय नेतृत्व पंक्तिले यो कुरालाई खण्डन गर्ने जाँगर देखाएन । फलस्वरुप एकोहोरो रुपमा दिइएको अभिब्यक्तिले एमालेबिरुद्ध घृणा पैदा गर्‍यो । पछिल्लो चुनावको क्रममा एमालेले केन्द्रीय नेतृत्वलाई मधेश केन्द्रित गराएर यस्ता भ्रमहरु चिर्ने प्रयास भए पनि त्यो आम नागरिकको बीचमा पुग्नेगरि हुन सकेन । एमालेले मधेशीलाई हेप्यो र एमाले मधेश बिरोधी हो भन्ने कुरा चिर्ने काममा एमालेले सफलता पाउन सकेन । जसले पनि परिणाम एमाले नेताहरुले भने जस्तो उत्साहजनक आएन ।
कारण नं. ४ः
भारतको नाकाबन्दीबिरुद्ध सशक्त रुपमा उभिएको ओली सरकार र एमालेलाई मधेशमा सबैले घेराबन्दीमा पार्ने काम गरे । एमाले नेताहरुको अभिब्यक्तिलाई पनि स्मरण गर्ने हो भने एमाले बिरुद्ध बाहय शक्ति पनि लाग्यो । राजनीतिक धरातलमा देखिएका कतिपय घटनाक्रमले एमाले नेताहरुले दिएको यसखाले अभिब्यक्तिमा दम रहेको पाइन्छ । नाकाबन्दी बिरुद्धको एमालेको अडान मधेशमा पाच्य हुन सकेन । भारत बिरुद्धको अभिब्यक्ति राष्ट्रवाद होइन भनेर नाकाबन्दी बिरुद्धको एमाले अडानलाई चित्रित गर्न बिपक्षीहरु सफल भए । भारत नभए नेपालमा केही पाईंदैन त्यही भएर भारतको बिरोध गरेर हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न एमालेका इतरका शक्तिहरु सफल भए त्यो कतिपय हदसम्म ठिकै पनि होला । तर एमालेले परस्पर हितको आधारमा सम्बन्धहरु बन्ने कुरामा आफू दृढ रहेको कुरा स्थापित गर्ने कोशीस गरेन । यसलाई एमाले इतरका शक्तिले “एमालेको खोक्रो राष्ट्रवादको” रुपमा स्थापित गरिदिए जुन एमालेका लागि प्रतिकूल हुन पुग्यो ।
कारण नं. ५ः
सामूहिकता र बर्गीय हार्दिकता यतिबेला एमालेको इतिहास भएको छ । हिजोका असल कार्यशैलीहरु आज एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । नेतामा बुर्जुवा संस्कार हावी भएको छ । नेता उपरखुट्टी लाएर आदेश दिने कार्यकर्ता आदेशको तामेली गर्ने, पार्टीको काम तर्दथवादमा मात्र सीमित भएको छ । एकले अर्कोलाई तास्ने र खुइल्याउने काममा एमाले भित्रको गुटको सम्पूर्ण उर्जा सकिएको देखिन्छ । अराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र अराजकतालाई मौलाउने अवसर दिएको छ । आफ्नालाई सक्न प्रयोग गरिने उर्जा प्रतिपक्षीहरुलाई परास्त गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रको नेतृत्वले जुन दिन प्रयोग गर्छ, त्यो दिन फेरि एमालेकालागि सुखद यात्राको प्रस्थान बिन्दु बन्ने छ । तर अहिले परिणाममा यही गुटको एउटा प्रभाव पनि परेका छ ।
यी र यस्ता समस्याहरु बीचबाटै प्रदेश न २ मा एमालेले जुन परिणाम निकालेको छ त्यो फेरि पनि एमालेका निम्ति उत्साजनक नै हो । प्रदेश नं २ मा एमालेले गुमाउनु पर्ने केही थिएन, सबै सकिएकै थियो । जे पाएको छ त्यसले मधेशका नागरिकले एमालेलाई माया गर्छन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । मधेशमा देखिएको एमालेको परिणाममा मधेशी, पहाडी, आदिवासी जनजाती सबै समुदाय देखिन्छ । त्यहाँ मिनी नेपाल छ ।
एमालेका लागि अर्को सबल पक्ष भनेको के रह्यो भने मधेशमा एमालेको बिरुद्ध पुत्ला जलाउने, एमालेको राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्नेहरु कालान्तरमा गएर एमालेमा प्रवेश गरेर चुनाव लडे, कतिपयले जितेका पनि छन । हिजो एमालेका बिरुद्ध जाईलाग्ने प्रवृत्ति राजनीतिक होइन भन्ने कुरा यो चुनावले स्थापित गर्न सक्यो । यी र यस्तै परिस्थिति र परिबन्दबाट एमाले गुज्रंदै गर्दा मधेशमा उसले पाएको जनमत उसका निम्ति आशाको संचार गर्न काफी छ ।
उज्यालो अनलाई डट कमबाट